Boqorradii Imbaraadooriyaddii Roomaanka – Kaasho Maanka
Taariikhda Imbaraadooriyaddii Roomaanku waa mid aadan marna ka xiiso beeli karin. Waa taariikh kayn ah oo aad wax walba ugu tagayso. Wakhti boqol sano ka yar ayay sagaal iyo laabatan boqor yeelatay. 29-kaas afar ka mid ah keliya ayaa si caadi ah u dhimatay, inta kale waa qaar la sumeeyay, qaar la daldalay, qaar la waayay iyo qaar naftooda la baxsaday. Laga geyoon maayo in la ga sheekeeyo taariikhdooda, balse in yar un baan ka taabanayaa taariikhdaas.
Markii uu geeriyooday boqorkii dhidibada u taagay Imraadooriyadda ee Augustus Ceasar, dagaal sokeeya ayaa dalka ka qarxay, waxaana dhiig badani ku daatay in la helo ciddii badali lahayd isaga. Dagaal dheer ka dib waxaa kursigii dhaxlay wiil uusan dhalin balse ku abtirsada (Adopted Son). Wax badan wiilkaas taariikhdiisa laga ma xuso balse waxaa la sheegaa in uu nin shaki badan ahaa. Intii xukunka hayay Rooma ma soo marin maalin aan dil toogasho cid lagu fulin. Markii uu dhintay nin waalan oo Caligura la oran jiray ayaa dalka boqor ka noqday. Waallidiisu waxa ay gaarsiisanayd in uu faraskiisi Aqalka Sare (Senate)-ka ku daray. Xoog ayaa looga tuuray kursiga, waxaana lagu badalay nin doqon-u-eke ahaa oo adeerkiis ahaa. Durba raganimo iyo xiniinyo aan laga filayn ayuu la soo baxay. Muddo gaaban oo xilka hayayna, markii ugu horraysay ayay Roma xoogaa nabad iyo xasilooni ku naalootay.
Naagtiisi ayaa ninkaan sumaysay, iyada oo rabtay in uu kursiga ka dhaxlo wiil ay nin kale u dhashay. Waa ay u meelmartay arrintaasi, wiilkeedii boqornimadii waa uu dhaxlay. Neero ayaa la oran jiray wiilkaas. Waxa uu ahaa nin yaab leh. Waxa uu isu haystay in uu fannaan aad u cod macaan yahay. Waxa uu ciidamada amri jiray in dadka la soo aruuriyo oo tiyaatarka la isugu keeno si’ay heesihiisa u dhagaystaan. Dadkuna waa ay ku yalaalugoon jireen cod xumadiisa oo qaar baa matagi jiray marka ay heesihiisa maqlaan, qaar u dhintayna waaba la sheegaa.
Sawir muujinaya dabkii ka kacay Rooma xilligii Neero
Waxaa la sheegaa in magaalada Rooma uu dab qabsaday, dabkaasina muddo sagaal berri ah uu socday, isaguna uu sagaalkaas beri tiyaatarka ka heesayay dadkana ku khasbayay in ay heesihiisa macaan dhegeystaan intii ay dabka damintiisa ku mashquuli lahaayeen. Dhacdadaas ugu dambaysa ayay dad badani ka keceen. Waxayna keentay in kursiga laga tuuro, isla markaasna dil toogasho lagu xukumo. Markii uu sii dhimanayay erayadii ugu dambeeyay ee afkiisa laga maqlo waxa ay ahaayeen, “Maxaa adduunka fannaan ka baxaya maanta.”
W/Q: Cawil Cabdille 12th February 2019